friend | HoLOLo....DiLoLO | Page 2
February 14, 2010 by hololodilolo	friend, idea	1 Comment
hololodilolo.info ဆိုတာလေးကို Mysteryzillion ရဲ့ admin ကြီး Saturngod ကလုပ်ပေးပါတယ်။ June 18 ကတည်းက ရခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မလည်း ဘယ်လို ပြောင်းရမှန်းမသိ။ သူကလည်း လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီး မေ့။
ဒီဘက်ကပို့စ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာ မေးမြန်းစုံစမ်းပါဦးမယ်။ အဲဒီအိမ်ကိုလည်း လိုက်ခဲ့ကြပါဦးနော့။
ခုတလော ကျွန်မအလုပ်များတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်တယ်။
ရေးထားတဲ့စာတွေရှိပါတယ်။ တင်မယ်နော်။ မေ့ကျန်နေလို့ပါ။ ကဗျာတွေလည်း ရေးဖြစ်တယ်။ ခဏစောင့်ပါရှင်။
July 17, 2009 by hololodilolo	about me, friend	1 Comment
ဒါကတော့ ကျွန်မရုံးကလူတွေ ကျွန်မတို့ရဲ့ google group မှာ တင်လိုက်တဲ့စာတွေပါ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဘုန်းကြီးပါစေ။ အသက်ရှည်ပါစေ။ ကျန်းမာပါစေ။ ချမ်းသာပါစေ။ ယောက်ျားရပါစေ။
ညီမလေး ”ဆု” အတွက်
မအိ ငယ်ငယ်တုန်းက စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ဘူးတာ။ အရမ်းသဘောကျလို့ ”ဆု” အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ရေးပေးလိုက်တယ်နော်။
”ဒီနေ့ဟာ မနက်ဖြန်အတွက် နောင်တရစရာနေ့တစ်နေ့မဖြစ်ပါစေနဲ့”
ဆု မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မဆုရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ စိတ်ဆိုးတဲ့အရိပ်အယောင်ကို တစ်စွန်းတစ်စတောင် မတွေ့ဖူးဘူးနော်။ စခင်တဲ့အချိန်ကစပြီး အခုချိန်ထိပေါ့။ ပြီးတော့
ပျော်ပျော်လဲနေတတ်တယ်နော်။ အဲဒီလို နေတတ်တဲ့ မဆု တစ်ယောက် ယနေ့ကျရောက်သော 24 နှစ်မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်
ချစ်သော၊ ခင်သော သူများနှင့် ဆုံဆည်းနိုင်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ မြူတစ်မှုန်မှမရှိဘဲ ဘ၀ကို အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
ငကြောင် or ဂဂျောင် အသက်ရှည်ပြီး များများကြောင်နိုင်ပါစေ။ဂျောင်လည်းဂျောင်နိုင်ပါစေ၊
ကြိတ်ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေ တာတွေလည်း ရပါစေ။
ပြီးတော့ မယ်တွန် ဆိုတဲ့နာမည်လဲ့မေ့မသွားနဲ့
ငါ ဆုပြောနေကျ ငကြောင် ။ စွတ်ပြုတ် ဆိုတဲ့စကားတွေကိုလည်း အမှတ်ရနေတဲ့
– ပင်လယ်ကြီးက မာန်ဖီနေတယ်
– ကျောက်ဆောင်တွေလောက် မင်းနှလုံးသားက မာကျောသလားတဲ့
– ကောင်းကင်ကြီးက အပြာနုရောင်လွမ်းခြုံထားတယ်
– မင်းစကားလုံးတွေ ဘယ်လောက်ထိ ကျယ်ပြန့်နိုင်မလဲတဲ့
– ကဗျာဆရာတွေလည်း ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတယ်
– မင်းကလောင်က ကဝေ တစ်ယောက်လို စွမ်းသလားတဲ့
– တော်ဝင်တဲ့ ပန်းသဇင်က လည်တိုင်တမော့မော့နဲ့
– ebayလည်း discount ချနေတယ်
– အရိုးလည်း စကားပြောကျင့်နေတယ်
– ငကြောင်လည်း စာတွေဖတ်နေတယ်
မင်းနဲ့ပြိုင် “အို“ လုပ်မလို့တဲ့
– အနားက တစ်ယောက်လည်း အတိတ် မေ့အောင် ကြိုးစားနေတယ်
မင်းနဲ့ပြိုင် “အောင်း“ ချင်သတဲ့
– တစ်ယောက်ကလည်း ကလောင်သွေးနေတယ်
မင်းနဲ့ပြိုင် blog မှာ ရန်ဖြစ်မလို့တဲ့
– leader ကတော့ ရူးချင်နေတယ်
မင်းကို မေ့မရမှာ စိုးလို့တဲ့
ma san(မစမ်းနဲ့နော် ဆု။ ကြောက်လို့)
အမကတော့ word file နဲ့ တင်ပေးထားတယ်။ ဖတ်ကြည့်နော်။
နင့်ရဲ့ အနားက နင့်ကိုချောင်းနေတဲ့ ငါကွ
ဂျက်လီရဲ့ 24 နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံပါစေ
ငါက ကျန်တဲ့ ဆု မတောင်းပေးတော့ဘူးနော်။
နင့်မှာ က ဆု ရှိနေတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မှာ ငါရဲ့ အချိန်အားလုံးကို နင့်ကိုပေးမယ်။
အော် အသက်တွေတောင် တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါရောလားနော်…………………….
ဟိုးတုန်းက ငါတို့ Eco ဆရာပေးနေကြ ဆုတောင်းလေးပဲ ပေးလိုက်တယ်
<> ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်ပါစေ <>
June 18, 2009 by hololodilolo	about me, friend	Leaveacomment
အင်း တနေ့တနေ့ ရုံးကိုလာလိုက်၊ အလုပ်လုပ်လိုက်၊ သင်တန်းလေးသွားပြေးတက်လိုက်၊ စာတွေကျက်လိုက်နဲ့ အချိန်တွေလည်းကုန်မှန်းမသိကုန် ကုန်နေလိုက်တာ။
အချိန်ကုန်နေတာနဲ့အမျှ အသက်တွေလည်း တဖြေးဖြေးကြီးကြီးလာပြီပဲ။
ဟာ အသက်ဆိုမှသတိရတယ်၊ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ရှိတာပဲ၊ ငါ့နဲ့နော် အရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုမေ့နေရတယ်လို့။
သူကအလုပ်ဝင်မှခင်တဲ့သူငယ်ချင်းလေ၊ သူငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ထက်တော့မဆိုစလောက်လေး ကြီးတယ်(အသက်ကိုပြောတာပါ)
သူ့ပုံစံလေးကို နဲနဲပြောပြမယ်လေ သိချင်တယ်မဟုတ်လား
သူကလောကကြီးကိုဘောင်ခတ်ပြီးကြည့်တဲ့သူမျိုးလေ(မျက်မှန်တပ်ထားလို့ပါ) သွားတော့မထိလိုက်နဲ့Fighter နော်၊ဘာမှတ်နေလဲ(ကိုယ်လည်း အတူတူပါပဲ)
သီချင်းဆိုလည်းကောင်းတယ် ၊ ကော်ဖီလဲကြိုက်တယ်
ဘီယာဆိုလည်းရတယ်(ဟ ဟ ငါကွမိန်းမ)
စိတ်သဘောလည်းကောင်းတယ်၊ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာ တခါမှမမြင်ဖူးဘူး(ကိုယ့်လိုပဲပေါ့)
ဒီနေ့သူ့မွေးနေ့လေ(ဪ မေ့ပြန်ပြီ နာမည်ပြောဖို့)
အဟမ်း အဟမ်း (လူရှိန်အောင်ပေါ့ )
အခုကစပြီးတော့ မစုအတွက် ချစ်ညီမ ဇင်လေးက မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးပါတော့မယ်ရှင့်(ဒီလိုပဲညာစားနေတာ ကြာပေါ့)
ဘီယာများများသောက်နိုင်ပါစေ(သတိ ဘီယာသောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်)
အခက်ခဲဆုံး Program တွေလဲများများရေးနိင်ပါစေ(Input 1&2, Process +, Output bar htwet ma lal ma thi woo naw)
မျောက်ကြီး အဲ ဟုတ်ပါဘူး အကိုကြီးကိုလည်းများများ ကြောင်နိုင်ပါစေ(ကြောင်တာဟုတ်ပါဘူး ချစ်တာနော်)
နောက်တာပါ၊ ဒီတခါတော့ အတီ(အတည်)နော်(ဒါဆို ခုနကတော့ ဘယာကြော်ကုလားကြီးပေါ့) ဟီးဟီး
၂၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီး၊ အေးချမ်းသောဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ဘဝလမ်းခရီးမှာ ကြုံတွေ့လာရမဲ့ အခက်အခဲ၊အတာအစီးတွေကို ကျော်လွှားကာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို လှမ်းတတ်နိုင်ပါစေ။
ဇင်လေးပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေထဲမှာ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
စုကို မွေးနေ့မှာ ပျော်စေချင်တဲ့ စိတ်တခုပဲရှိပါတယ်။
ပြောမရ ဆိုမရ တဲ့ ညီမ
ရုံးက ချစ်ညီမလေးရဲ့မေးလ်ပါ။ သူနာမည်စာလုံးပေါင်းတော့မှားနေတယ်။ ဆုဝေထွဏ်းကို စုဝေထွန်းလို့မှားနေတယ်။ ရှိစေတော့။
Why and How ???
Shared joy is double job and Shared sorrow is half sorrow. စကြားဖူးကတည်းက ဒီစကားလေးကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူ ပျော်စရာတွေ၊ ၀မ်းနည်းစရာတွေ မျှဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်မက အပေါင်းအသင်း သိပ်မင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ပုံစံကိုက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စလိုက်နောက်လိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလား။ ခဏခဏလည်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကို ဂရုစိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ ကျွန်မက ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရော၊ အမျိုးစုံပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ တိုင်ပင်သံ၊ ရင်ဖွင့်သံ၊ တွေကိုလည်း အခါခါကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပျော်တွေကို ကျွန်မ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာခဲ့သလို၊ ၀မ်းနည်းစရာတွေကိုလည်း ရင်ထဲကနေ ခံစားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် …
ကျွန်မမှာ မျှဝေခံစားပေးခြင်း ဆိုတာသာ ရှိတာပါ။ အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ အရည်အချင်းက လုံးဝကို ချို့တဲ့နေပါတယ်။ သူတို့တွေ ကျွန်မကို တခုခုလာပြောပြမယ်။ ကျွန်မနားသာထောင်ပေးနိုင်တာပါ။ ကျွန်မအမြင်ဆိုတာထွက်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လာလဲ။ သူတို့ကိစ္စတွေကို ကျွန်မစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ သူတို့ခံစားမိလာတာပေါ့။ ကျွန်မအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကဆို ကျွန်မကို ဒီလိုလေး ပြောဖူးပါတယ်။ “နင်က ကိုယ်မခံစားဖူးရင် နားမလည်ပေးတတ်ဘူး” တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့များ ကျွန်မအဲဒီလိုဖြစ်ရတာပါလဲ။ အဖြေက ဒီလိုများဖြစ်မလား။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုယ်က လုပ်ချင်တာတော်တော်များများကို သူများဘာပြောပြော ကိုယ်လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ခဲ့တာများတာကိုး။ တိုင်ပင်တယ် ဆိုတာနည်းပြီး၊ အသိပေးတာက များပါတယ်။ နောက် ကျွန်မရဲ့အမြင်တွေကလည်း ချော်တော်တော်တွေသာ များပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်ရင်သာ ကိုယ်ခံမယ်။ တခြားသူကိုတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်များလား။
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျွန်မဘာအထောက်အကူမှ မပေးနိုင်ရင်တောင် သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည်၊ ပုခုံးတစ်ဖက်၊ ဟစ်တိုင်တစ်တိုင် တကယ်ကို ဖြစ်ချင်တာပါ။
ကျွန်မဘက်ကကြည့်ရင်ရော။ ကျွန်မက ခံစားချက်တော်တော်များများကို သိုဝှက်မထားတာများပါတယ်။ ကျွန်မရင်ထဲရှိသမျှ ထုတ်ပြောလိုက်ရမှ ဆိုတာမျိုးပါ။ စိတ်အခတ်မသင့်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာလည်း ပွစိပွစိနဲ့ ပြောပြနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို နက်နက်နဲနဲစိတ်ညစ်စရာတွေကိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်မေ့ထားချင်တတ်ပါတယ်။ တချို့တချို့ကိစ္စတွေက ကိုယ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ သူ့ဘာသာပြောင်းလဲမှ ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ ဘယ်သူမှကူလို့မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မရှုပ်ရလေအောင် အဲဒါမျိုးဆိုရင် ဘယ်သူ့မှ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ shared sorrow ဆိုတာကို ကျွန်မ မကျင့်သုံးနိုင်တာများလား။ တခါတလေ ကျွန်မခံစားချက်ကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်နားမလည်ပါဘူး။
တကယ်ကို အေးစက်စက်ဖြစ်နေတာလား။ Continue reading →
April 26, 2009 by hololodilolo	friend, thoughts	Leaveacomment
သူမကို စတင်သိတာကတော့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကတည်းကပါ။ စာတော်လွန်းသော၊
အထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာတော့ သိတယ်ဆိုရုံထက် မပိုခဲ့မိဘူး။ ကျွန်မလို
အငြိမ်မနေနိုင်သောသူနဲ့ သူမလို အေးဆေးသောသူဟာ သူငယ်ချင်းမဖြစ်လာတာတော့
အထက်တန်းအပြီး ကွန်ပြူတာကောလိပ်ကို တက်တော့ သူမနဲ့ ကျွန်မပြန်ဆုံတယ်။
(ကွန်ပြူတာမှာ ကျွန်မတို့အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသား ကျောင်းသူ
တော်တော်များများ ပြန်ဆုံပါတယ်။) မှတ်မှတ်ရရ မှတ်မိတာက သူမ roll number က
ကျွန်မထက် နောက်ရောက်နေလို့ အရမ်းအံ့သြခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီနောက်လည်း
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေလည်း အများကြီးထပ်ရတယ်။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲ ကျွန်မရဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းတာပါပဲ။
မထူးဆန်းလှစွာပဲ သူမဟာလည်း ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သိပ်အေးစက်လွန်းတဲ့ သူမကိုသာမန်သူငယ်ချင်းထက် မပိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
တစထက်တစ သူမဟာ ကျွန်မဘ၀ထဲ ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ ထက်မြက်တဲ့ဥာဏ်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု စတာတွေက
ကျွန်မရဲ့ အားကျတဲ့သူတစ်ယောက်နေရာကို သူမကို ရောက်စေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့
အေးစက်စက်မျက်နှာက နွေးထွေးမှုကိုလည်း ကျွန်မရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ခပ်ပူပူကျွန်မနဲ့ အေးစက်စက်သူမဟာ
အတွဲအစပ်မမိလှစွာပဲ နီးကပ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မအတွက် သူမဟာ
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ သူမအတွက်လည်း
ကျွန်မဟာ တစုံတခုသော အတိုင်းအတာအထိ သူ့ဘ၀ထဲ ရှိနေမယ်ဆိုတာ သေချာခဲ့ပါတယ်။
သူမကို အားအကျမိဆုံးအချက်က ဘယ်တော့မှ စကားမရှုပ်တတ်တာပဲ။ သိပ်လုံပါတယ်။
မပြောပါနဲ့ ပြောထားစရာမလိုပါဘူး။ သူမဘာသာ ထိန်းသိမ်းထားမှာပါ။
ကျွန်မကတော့ အမြဲတမ်းကြိုးစားပေမယ့် တခါတခါ မရတတ်ဘူးလေ။)
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်မယုံကြည်မှုတွေကို သူမဆီက ပြန်ပြန်ရတတ်တာပါပဲ။
တခါတခါကျွန်မရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ကျွန်မဘာသာ
ပြန်မေ့နေတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ သူမကြောင့် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ
တခါတခါကျရင်လည်း သူမလို အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ချင်တယ်။
၀န်ခံစရာတခုရှိသေးတယ်။ အရင်က သိပ်အေးပါတယ်ဆိုတဲ့သူမဟာ
ကျွန်မအနားရောက်လာတော့ အထိုက်အလျောက် ခပ်လောင်လောင်စရိုက်တချို့
ကူးစက်မိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်။ (သူမကို သူများတွေက သွက်လာတယ်လို့
ပြောတိုင်း ကျွန်မခံစားမိတာပါ။) အဲဒါကို တခါတလေ ကောင်းတယ်လို့ ထင်မိပြီး
ဒီနေ့ကတော့ သူမရဲ့ ၂၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါ။ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်
ကျွန်မတို့ ဝေးကွာနေရာကနေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူမမွေးနေ့မှာ ကျွန်မတို့
နှစ်ယောက်တွေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထူးထူးခြားခြား မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးစရာတော့
မရှိဘူး။ အရင်သူမမွေးနေ့တွေတုံးက ဆိုရင် ကျွန်မကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားတာတွေ
ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
ဘာမှမလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်လောက်အထိလဲ ဆိုရင် အမြဲ သတိရနေကျ
သူမမွေးနေ့ကိုတောင် မေ့လျော့နေခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ဆိုးရင်း
ဒီညနေတွေ့ကျရင် သူမကို ပြောစရာ စကားတချို့ အပြင် ကျွန်မမှာ
ဘာမှပါနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ post လေးကိုလည်း သူမဖတ်နိုင်ဖို့
မသေချာပါဘူး။ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူမအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်တခု
Wai Wai, Happy Birthday and Many happy returns of the day.
January 5, 2009 by hololodilolo	friend	Leaveacomment
My Web My Style ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲ၊ ပြပွဲလေးကို ဒီနေ့ MICT မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဘလာဂေါက်ဦးစီးတဲ့ တကိုယ်ရေအင်တာနက်စာမျက်နှာများပြပွဲဆိုတာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ဆိုဒ်တွေထဲက နောက်ဆုံး စကာတင်ဆိုဒ် 15ခုကို ပြထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့မဲစနစ်နဲ့ဆုပေးပါတယ်။ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုရသွားသူကတော့ ကိုမျက်လုံး၊ ဒုတိယက ကိုမောင်လှ၊ တတိယက 969 က မောင်ခပါ။ ပွဲအကြောင်းကိုတော့ မယမင်းရဲ့ ရွှေမြန်မာ မှာလည်းဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ mysteryzillion ကလူတွေကိုနဲ့လည်း ဆုံရတွေ့ရတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ရတယ်။
နောက် 969 ကမောင်လေးနှစ်ယောက်ဆီက စက္ကူအရုပ်လေးရခဲ့တယ်။ (အင်း လုခဲ့တယ် ဆိုပိုမှန်မလား။) ဒီနေ့အတွက်တော့ အဲဒါအပျော်ဆုံးပဲ။ မနက်ပွဲစကတည်းက အဲဒီအရုပ်ကလေးကို သဘောကျနေတာလေ။ တောင်းရမှာအားနာလို့။ နောက်ဆုံးတော့ လက်ကမချတာနဲ့ ပေးလိုက်ကြတာဖြစ်မှာပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် သိပ်ဝမ်းသာပါတယ်။ (thz nanda and maung kha)
နောက်မယမင်းနဲ့ လမ်းတွေလျှောက်လိုက်ကြတာ Christmas Walking ပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ပေါ့။
December 25, 2008 by hololodilolo	diary, friend	1 Comment